China Nkeji ụlọ na ndị nrụpụta | KAIHUA
● Usoro ụlọ
Ezinaụlọ dị iche iche nwere ikike mmepụta kwa afọ nke 300-500 setịpụrụ ebu, yana oge nnyefe ọsọ ọsọ na ọnụ ahịa asọmpi. A na-eme ọtụtụ ndị ebu maka okpokoro na oche, igbe nchekwa, kọfị, nkata na-asa akwa, ụmụaka ihe egwuregwu wdg. ndị ahịa anyị.
High Quality (akpụzi & Product Quality)
On-oge nnyefe (Ihu Sample & akpụzi nzipu)
Ọnụ Nchịkwa (Kwụsị & Ọnụ efu)
Ọrụ kacha mma (Ọrụ maka Ndị Ahịa, Ndị Ọrụ na Ndị Na-ebunye Ha)
Sistemụ- U8 ERP management system
Usoro - Nhazi oru ngo
Nhazi-Usoro ịrụ ọrụ arụmọrụ
Manufacturing otu na-iso machining ogbako, nzukọ ogbako, spotting omumuihe, Polish ogbako andinjection workshop.Among niile n'ichepụta otu, e nwere ihe karịrị 30% technicians shom e ọdịda dị ka n'etiti orsenior technicians Ọzọkwa, technicians onye nwere ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ na- karịrị 20%.
Machining otu: iso nke ike ike machining, ọkara nkenke machining, nkenke machining, 5-axis machining center, mmemme na ndị ọzọ dị iche iche. Ihe omumu ihe omuma na ekpuchi site na ikuku. Nhazi niile dị n'okpuru ERP.
Mgbakọ otu: ndị na-akpụzi ihe niile nwere ike ilekwasị anya na ịmebe ihe nke ọma. The nkezi ahụmahụ nke ebu ebu karịrị afọ 20.
Otu na-ahụ maka otu: Site na igwe 100T-500T, ndị ọrụ ahụ ghọtara ụkpụrụ nke ịchọta, otu esi ejikwa ntụpọ.
Polishing otu: na miri emi njikọ nzukọ otu, ha maara otú iji nweta polishing chọrọ nke dị iche iche nke ngwaahịa, ọbụna mirror Polish larịị.
Otu ogwu ogwu: anyi nwere igwe ogwu di site na 120T-3300T, ya na robot, magnet clamping na hydraulic clamping. Ndị ọrụ ahụ nwere ike ịnwale ọnọdụ ndị dị nso na ọnọdụ nrụpụta n'ezie wee gafee karịa ọnọdụ nrụpụta ahụ n'ezie, ka ndị ahịa anyị nwee ezigbo ntụnye.
Nke gara aga: Home Ngwaọrụ Division
Osote: Ngalaba Akpaaka